Paris Saint-Germain oo Kooxda Liverpool kula dagaalamaysa xagaagan saxiixa Kalidou Koulibaly – Gool FM
Paris Saint-Germain oo Kooxda Liverpool kula dagaalamaysa xagaagan saxiixa Kalidou Koulibaly
Haaruun May 14, 2020
(London) 14 Maajo 2020. Paris Saint-Germain ayaa la soo sheegayaa inay Kooxda Liverpool kula dagaalmayso xagaaga saxiixa Kalidou Koulibaly.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxaa diiradda u saaran Kalidou Koulibaly xagaagaan si ay u helaan badalka daafacooda Thiago Silva.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka Ligue 1 ayaa loo caleemo saaray horyaalnimada Faransiiska kaddib markii xilli ciyaareedkii si lama filaan ah loo gabogabeeyey, sababo la xiriira faafaha Coronavirus.
Tani waxay kooxda siisay waqti ay ku eegaan saxiixyada noqon kara kuwa ugu fiican xagaaga mashquulka ah ee caasimadda Faransiiska.
Sida laga soo xigtay Wargeyska L’Equipe, waxaa jira afar boos oo uu Tababare Thomas Tuchel jeclaan lahaa inuu ku xoojiyo shaxdiisa, iyadoo mid ka mid ah uu yahay daafac dhexe, isla markaana uu qorsheynayo inuu bedel u helo mustaqbal la’aan kabtan 35-sano jir ah ee Thiago Silva.
Taasi waxay ku keentay iyaga inay ku hoggaamiso Koulibaly, iyadoo 28-sano jirkaan la la xiriirinayo inuu xagaagan ka tagayo kooxda Napoli.
Xiddiga xulka qaranka Senegal ayaa la la xiriirinayay kooxo badan oo ka dhisan Yurub oo ay ku jiraan Liverpool iyo Real Madrid, si kastaba ha ahaatee kooxda reer France ayaa la rumeysan yahay inay hadda gacanta kula jirto.
Iyadoo hore ula macaamilay milkiilaha kooxda Napoli ee Aurelio De Laurentiis oo ay kala heshiiyeen Edinson Cavani iyo Ezequiel Lavezzi, agaasimaha kubadda cagta PSG ee Leanardo wuu ogyahay waxa ay tahay in heshiis la la gaaro kooxda ka dheesha horyaalka Serie A.
Miralem Pjanic oo ku sii jeeda Chelsea, inkastoo uu heshiis horudhac ah la gaaray Kooxda Barcelona